Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » A na-echetazi mkpụrụ Sesame ugbu a n'ihi Salmonella
Ebe a na-eri nri nke Nature na-echeta Org mkpụrụ osisi sesame gbara n'ọma ahịa n'ihi ọrịa Salmonella nwere ike ime. E rerela ngwaahịa echetara dị ka egosiri na tebụl.
• ika: Ọ dịghị
• Ngwaahịa: Org hulled mkpụrụ sesame
• Ụlọ ọrụ: Ụlọ nri Nature's Pantry
• Okwu: Nri - Mmetọ microbial - Salmonella
• Otu: Akụ, ọka na mkpụrụ
• Ihe ị ga-eme: Ejila ngwaahịa echetara
• Ndị na-ege ntị: ọha ọha
• Nhazi ihe egwu: Klas 2
Brand Product size UPC Koodu nkesa
Ọ dịghị onye Org gbakọtara mkpụrụ osisi sesame Mgbanwe -
onye na-ede akwụkwọ na-ere ere Malite na 200516 Niile nkeji rere si
Ọktoba 8, 2021 ruo Nọvemba 16,
2021 gụnyere A na-ere ya na
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ, 3744
• Ọ bụrụ na ị chere na ị dara ọrịa site na iri ngwaahịa echetara, kpọọ dọkịta gị
Lelee ka ịhụ ma ị nwere ngwaahịa echetara n'ụlọ gị
• Ejila ngwaahịa echetara
• Ngwaahịa echetara kwesịrị ịtụfu ma ọ bụ weghachi ya na ebe azụrụ ya
Ihe nchoputa ule kpalitere ncheta a.
Enwebeghị akụkọ ọrịa metụtara oriri ngwaahịa a.
Ụlọ ọrụ nyocha nke nri Canada (CFIA) na-eme nyocha nchekwa nri, nke nwere ike iduga na icheta ngwaahịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na echetara ngwaahịa ndị ọzọ nwere nnukwu ihe ize ndụ, CFIA ga-eme ka ọha na eze mara site na ịdọ aka ná ntị ncheta nri emelitere.